ICRC: Xaaladda Somalia way ka sii Daraysaa
Haweenayda Af-hayeenka u ah Laanqeyrta Cas Nicole Englebrecht ayaa sheegtay in 4,000 ruux ay gaareen xeryaha qaxootiga bishii July
Hay’adda Laanqeyrta Cas ee Caalamiga ah ayaa sheegtay in xaaladdu bini'aadanimo ay aad u daran tahay, kadib markii boqolaal kun oo ruux ay barakaceen dagaaladii saddexdii sano ee u dambaysay ka socday caasimadda Somalia ee Muqdisho.
Haweenayda Af-hayeenka u ah Laanqeyrta Cas Nicole Englebrecht ayaa sheegtay salaasadii maanta in 4,000 ruux oo cusubi ay soo gaareen xerooyinka qaxootiga ee duleedka Muqdisho bishii lasoo dhaafey oo kaliya.
Waxay sheegtay in badankoodu ay hantidii ay lahaayeen ay ka baaba’day, iyagoo si ay u noolaadan iibiya alaabo yar-yar amaba wax ka beerta dhulka teel-teelka ee meesha ku yaalla.
Laanqeyrta Cas ayaa sheegtay in hadda ay soo gabagabaysay inay raashin siiso in ka badan 55,000 oo ruux oo xerooyinkaas ku jira.
Afhayeenku Waxay sheegtay in dagaaladii u dambeeyey ee Muqdisho ay sii kordhiyeen dhibaatooyinka dadka magaalada deggan. ICRC waxay sheegtay inay daweysay dad gaaraya 200 oo ruux oo ay soo gaareen dhaawacyo kasoo gaaray hubkii la isku tuurayey, kuwaas oo lagu daweeyey cisbitaalada Medina iyo Keysaney 8dii maalmood ee lasoo dhaafay.